Bots Muusiga ugu Fiican ee Discord - VidaBytes | LifeBytes
Bots Muusiga ugu Fiican ee Discord
Iris Gamen | 11/06/2022 20:00 | Barnaamijyada
Haddii aad ku dhex milanto aduunka Discord, oo aad dareento in qolal-sheekadiisu ay noqdeen kuwo caajis ah, qoraalkan ayaa ku xiisaynaya tan iyo markaas. Waxaan dooneynaa inaan ka hadalno bots-yada muusikada ugu fiican ee Discord. Dhammaan isticmaalayaasha server-kan waxay raadiyaan inay kanaalkooda siiyaan muuqaal gaar ah, waana arrin kaliya oo ah in la ogaado kuwa ugu fiican.
Mashruucan, waxay ku tusinaysaa suurtogalnimada aad ku abuuri karto meel aad jeceshahay, oo lagu daro walxo kala duwan oo ka dhigaya mid shakhsi ahaaneed. Waxaad abuuri kartaa kanaalo, adeegayaal iyo xitaa waxaad horumarin kartaa bots-kaaga sida ay dhadhamiso.
Discord, waxay noqotay mid ka mid ah aaladaha fariimaha khadka tooska ah ee ugu muhiimsan. Waxaa jira noocyo badan oo bots ah oo lagu daro goobtan, kuwaas oo u dhaxayn kara kuwa loogu talagalay dhexdhexaadinta sheekeysiga, iyo kuwa shaqadooda ugu weyni ay tahay madadaalo, sida bots muusikada. Kaliya maahan inaan kuu soo bandhigno bots-yada muusikada ugu fiican, laakiin kuwa aan garanayn Discord waxaan sidoo kale ka hadli doonaa.
1 Khilaaf; maxay tahay iyo maxay shaqadu leedahay
2 Waa maxay bots on Discord?
3 Bots Muusiga ugu Fiican ee Discord
Khilaaf; maxay tahay iyo maxay shaqadu leedahay
Hubaal haddii aad xiriir la leedahay adduunka gamer, waxaad si fiican u garan doontaa goobtan. Maadaama, ay leedahay shaqada abaabulka, la kulanka dad cusub iyo la xiriirka asxaabtaada. Waxay ku saabsan tahay app chat la mid ah dhufto ee kale oo leh shaqo isku mid ah.
Mabda 'ahaan, waxaa loogu talagalay isticmaalayaasha gudaha ciyaaraha aduunka, halkaas oo ay ku kulmi karaan, isku dubaridi doonaan habka ay u ciyaaraan iyo hadalka marka ay ciyaarayaan ciyaarta. Ma aha oo kaliya inay isticmaalaan gamers, laakiin sidoo kale waxaa isticmaala shirkadaha qaarkood oo leh shaqaale badan.
Awood u yeelashada in aad ku wada xidhiidho codsigan waa nidaam aad u fudud, waxa u dheer in ay kuu soo bandhigto hawlo raadin oo kala duwan si aad u hesho qof gaar ah oo aad ku dari karto liiska xidhiidhkaaga. madal kan Waxa lagu qeexi karaa laba eray, abaabul iyo xidhiidh.
Sidaan soo sheegnay, inta badan server-yada ku yaal goobtan waxay la xiriiraan adduunka ciyaaraha fiidiyowga, laakiin sidoo kale Waxaad ka heli kartaa server-yo kala duwan oo mawduucyo kale lagaga hadlayo sida anime, dhaqaalaha, caafimaadka maskaxda, ama kaliya la kulanka dad cusub iyo samaynta saaxiibo cusub.
Khilaaf, ayaa ka soocan inta kale ee kala duwan ee fursadaha wada sheekaysiga. Sidoo kale, ma dajinayso ciyaarta markaad internetka kula hadlayso asxaabtaada ama asxaabtaada. Waad ku mahadsan tahay abuurista doorarka gudaha server-ka, waxaad maareyn kartaa oo aad dhexdhexaadin kartaa waxa ka dhacaya server-ka haddii abuuraha ugu weyn uusan halkaas joogin.
Waa maxay bots on Discord?
Bots ee Discord, waa barnaamijyo shaqadoodu tahay in ay si toos ah hawl u qabtaan. Hawlahani waxay u dhaxayn karaan ciyaarista muusikada ilaa isdhexgalka fudud ee u dhexeeya isticmaalayaasha adeegayaasha.
Iyadoo ku xiran waxa aad rabto inaad gaarto, waa inaad ku rakibtaa bot gaar ah. Barnaamijyadan yar yar Waxay kaa caawin doonaan inaad naftaada ka xorowdo hawlahaas kuwa ugu caajiska badan. Waa in la habeeyaa si wakhtiga hawlgalkoodu u socdo si sax ah.
Halkan, waxaan kugula talineynaa inaad ha ku darin bots iyada oo aan wax xakameyn ah, waxa fiican in aad wakhti ku qaadato sidii aad u heli lahayd midka ku habboon baahiyahaaga. Markaad go'aan ka gaarto, waxaad ka fogaan doontaa dhibaatooyinka iyo jahwareerka suurtagalka ah ee isticmaalayaasha.
Nooca bot-ka ayaa lama huraan u ah server kasta oo Discord ah. Iyaga, Waxaad awood u yeelan doontaa inaad ciyaarto muusig ay maqli doonaan dhammaan xubnaha server-ka, kaliya kicinaya amarada qaar
Iyada oo tiro badan oo bots ah oo suuqa ku jira ujeedadan, ma fududa in la helo midka ku siin doona natiijooyinka ugu fiican. Sidaa darteed, qoraalkan waxaanu ku siinaynaa hage faahfaahsan qaar ka mid ah kuwa ugu fiican.
Mid ka mid ah bots-yada dib-u-ciyaarista muusiga ugu dhamaystiran uguna caansan ka mid ah isticmaalayaasha Discord. Waxay kuu ogolaan doontaa inaad ku ciyaarto muusikada goobo kala duwan sida YouTube, Vimeo, SoundCould, iwm, had iyo jeer leh tayada codka ugu fiican oo gebi ahaanba bilaash ah.
Sidoo kale waxay ku siinaysaa awood aad ku abuurto liiska heesaha gaarka ah. Ku dar, kaas oo la jaan qaadaya aaladaha muusiga ee la daawado sida Twitch.
Bot muusig kale oo aad u xoog badan, oo leh hawlo kala duwan oo aad u badan. Adigoo isticmaalaya kontoroolka waxaad awood u yeelan doontaa inaad habayso shaqooyinka kala duwan ee firfircoonida ama amarada aad rabto inaad habayso. Intaa waxa dheer, waxa ay leedahay hawlo lagu awoodo in ay dhexdhexaadiso, aamusto ama si ku meel gaadh ah u mamnuucdo isticmaalayaasha ku xadgudba xeer kasta.
Bot muusig bilaash ah oo loogu talagalay Discord. Waxa ku jira hawlo la mid ah kuwa kale ee barnaamijyadan yar yar sida suurtogalnimada in lagu ciyaaro heeso meelo kale sida YouTube, Twitch, Mixer, Bandcamp iyo tiro badan oo warbaahin ah.
Sifooyinkeeda dib-u-qaadisteeda, waxaad u boodi kartaa heesta xigta, loop, dhaqaaq, ka saari kartaa safka, iwm. Sidoo kale, Chip wuxuu leeyahay ikhtiyaarka ah inuu ku tuso erayada heesaha la doortay.
Ujeedada ugu weyn ee botkan ee Discord waa in xalliya wax kasta oo la xidhiidha dhexdhexaadinta, madadaalada iyo muusiga. Mid ka mid ah qodobbada wanaagsan ayaa ah inay ku qoran tahay Isbaanishka, taas oo ka dhigi doonta maaraynteeda mid aad ugu adkeysanaysa isticmaalayaasha.
Ayana waa bot, si buuxda loo beddeli karo waxa isticmaale kastaa u baahan yahay. Adigoo adeegsanaayo otomaatigyada, waxaad awood u yeelan doontaa inaad dhexdhexaadiso waxa ku jira serverka. Waxa ay leedahay server-ka muusiga iyada oo loo marayo amarro iyo liis-ciyaareed halkaas oo aad ku dari karto heesaha aad jeceshahay, awood u leh inuu ka falceliyo heesaha ay ciyaaraan isticmaalayaasha kale.
Aad loo jecel yahay kuwa raadinaya a dhexdhexaadinta bot, laakiin marka lagu daro, waxay sidoo kale ciyaari kartaa muusig. Si toos ah u falanqeyso sheekeysiga server-ka si aad uga fogaato dhaqamada ka hor imaanaya sharciga. Iyada oo loo marayo amarro taxane ah, isticmaalayaasha si xun u dhaqma waa la aamusin karaa ama waa laga saari karaa.
Waxay la jaanqaadi kartaa aaladaha kale ee muusikada sida YouTube, Twitch ama SoundCloud. Ku dar, MEE6-kaas waxaa ku jira ciyaar muusig oo madadaalo leh oo aad kula raaxaysato la-hawlgalayaasha server-kaaga, halkaas oo aad ku qiyaasi doonto heesta iyo farshaxanka ciyaaraya.
Ugu dambeyntii, waxaan kuu keenaynaa kan cusub music bot kaas oo kuu ogolaan doona inaad ku dhegeysato muusikada xiriirada server-kaaga. Waa wax la habayn karo, oo ku siinaya karti aad ku dejiso doorarka ciyaartoyga, ka saarto heesaha nuqul ka mid ah, iyo xitaa abuurista liiska madow ee kanaalka.
Dhammaan bots-yadan aan soo sheegnay iyo qaar kaloo badan ayaa diyaar u ah in la soo dejiyo oo lagu rakibo Discord. Mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa ku siin doona taxane ah qalabyo kala duwan si aan loo dhexdhexaadin oo kaliya, laakiin sidoo kale waxay ka dhigi doonaa sheekeysigaaga meel firfircoon oo xiiso leh.
Waxaa jira wax badan oo laga heli karo codsigan fariimaha ah, laakiin inta ay taasi dhacayso, ka dhig serverkaaga adduun gaar ah adiga oo ku habaynaya bots-yada aad jeceshahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: LifeBytes » Barnaamijyada » Bots Muusiga ugu Fiican ee Discord
Maareeyaha faylka; waa maxay, hawlaha iyo beddelka